Tuesday June 11, 2019 - 10:05:40 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Shirka Amniga Caasimadda Muqdisho oo xalay la qabtay ayaa lagu qiimeeyay xaalada guud ee magaalada, iyadoo kulanka uu shir guddoominayay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Yariisow.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay Mas’uuliyiinta dhinaca amniga iyo saraakiisha ciidamada, waxaana lagu falan-qeeyay arrimaha ammaanka iyo tallaabooyinkii la qaaday.
"Shirka Amniga Caasimadda ayaan ku qiimeynay xaalada Guud ka dib kormeer iyo dabagal joogta ah oo aan wadnay muddo, isla markaasna go’aaminey dib u eegis in lagu sameeyo Qorshaha Sugida Amniga Caasimada" ayuu yiri Eng, Yariisow.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay go’aamiyeen in dib u eegis lagu sameeyo Qorshaha sugida amniga Caasimadda.
Waxaa uu sheegay in kormeer iyo dabal joogta ah oo muddo socday ay ku qiimeeyeen xaalada amniga Muqdisho.
Ciidamada amniga ayaa kordhiyay howlgalada lagu sugayo amniga, iyadoo xiray waddooyin dhowr ah, inkastoo odayaasha dhaqanka ay walaac ka muujiyeen xirnaanshaha waddooyinka qaar ee magaalada.